I-US / 48A (11.5KW) Abavelisi kunye nabaXhasi | Ifektri yase China / 48A (11.5KW)
Umbane wezorhwebo OCPP 1 ....
I-Ac 2 * 22kw 64A EV Umbane ...
16A 32A 40A 48A Amandla amatsha ...
Isikhululo se-EV sokutshaja iWall-Mo ...
Ukuvelisa US standard EV ...
Ifektri ngokuthe ngqo kwi-50A 250V AC Type1 Umbane weCar Power Charger iAmerican Standard Evse Uhlobo lweCable 1
Ifektri ngokuthe ngqo kwi-China EV itshaja ekhawulezayo, kwitshaja ye-EV, Sikwinkonzo eqhubekayo kubathengi bethu abakhulayo basekhaya nakwamanye amazwe. Sijonge ukuba yinkokheli kwihlabathi liphela kolu shishino kwaye sinengqondo, kuyonwabisa wethu ukukhonza nokuzisa awona manqanaba aphezulu olwaneliseko phakathi kweemarike ezikhulayo.
Inqanaba lesi-2, i-240 volt imoto yombane (EV) yokutshaja isikhululo
Inqanaba lesi-2, i-240 volt isithuthi sombane (EV) sokutshaja isikhululo sombane kuyo nayiphi na i-EV ukuya kuthi ga kwi-9X ngokukhawuleza kunendawo yokuphuma eludongeni eqhelekileyo, kunye nokuseto okuguquguqukayo kwe-amperage ukuya kuthi ga kwi-50 amps (14A-50A) kunye ne-plug-in okanye ufakelo olunzima. Ngewaranti yeminyaka emi-3 kunye ne-ETL edweliswe kukhuseleko lombane, ukutshaja kwethu kwe-EV kulula kuye nawuphina umbane ukuze afake ngaphakathi okanye ngaphandle. Itshaja ze-EVC10 zombane vechile sisitishi sokutshaja esinikwe amandla i-Wi-Fi kwaye sinikezela ngeempawu zokutshaja smart kusetyenziswa usetyenziso, kubandakanya amandla okuseta ishedyuli yokutshaja, fumana izikhumbuzo zokuplaga, jonga yonke imbali yokutshaja kwindawo enye, qhagamshela ne-Alexa , kunye nokuninzi.
Umzi mveliso wobuchwephesha wase China SAE J1772 Inqanaba 2 Ukutshintsha kwitshaja ye-EV
Umzi mveliso wobuchwephesha kwitshina ye-EV ye-China, Imveliso yombane, igama leNkampani, lihlala liphathelene nomgangatho njengesiseko senkampani, sifuna uphuhliso ngeqondo eliphezulu lokuthembeka, ukuthobela umgangatho wolawulo lomgangatho we-ISO ngokungqongqo, ukudala inkampani ekumgangatho ophezulu ngomoya wenkqubela phambili- ukuphawula ukuthembeka kunye nethemba.